Neichi chishandiso unogona kushandisa Google Mubatsiri neako Android smartphone uye AirPods | IPhone nhau
Neichi chishandiso unogona kushandisa Google Mubatsiri neako Android smartphone uye AirPods
Apple payakazivisa kuvhurwa kweAirPods, ikati idzi mahedhifoni asina waya ivo vakashandawo pamidziyo inochengetwa neAroid, iyo inopa kugona kukuru kune vashandisi vanofambidzana neiyo iPhone uye neApple smartphone pane zuva nezuva.
Kana zvakabatana neApple zvishandiso, AirPods inotipa zvakateedzana zvezvakanaka zvatisingakwanise kuwana mune zvimwe zvipenyu, senge Apple Siri mubatsiri. Asi zvinoita sekunge uyu muganho wapera, zvirinani pa Android, kubvira nekuda kweAirPodsForGA application, isu tinokwanisa kumisa Google Mubatsiri uye nekudyidzana neAirPods.
Sezvo isu tichigona kuverenga mu AndroidAuthority, nekuda kwekushandisa AirPodsForGA, chishandiso chinowanikwa mahara muGoogle Play Store, tinogona kupeta maAirPod kuti tibatsire Google mubatsiri, Google Assistant.
Kupesana nezvatinogona kufunga, eIchi chishandiso hachidi midzi yekuwana kuti ishande. Uye zvakare, inoshanda nechidzitiro chechigadzirwa, saka hatizofanirwe kubvisa yedu Android kifaa kwayakabatanidzwa kuti tikwanise kushandisa Google Mubatsiri.
Zvinoenderana neongororo dzevashandisi vakatombozviedza, iyi purogiramu haishande zvakanaka nemidziyo yese, asi tichifunga kuti kunyorera kuri mahara, hatizorasikirwa nechinhu nekuyedza. Zvakare zvinoratidzwa kuti kana kambani hombe isingaite chimwe chinhu, senge kuenderana kweAirPod neGoogle Mubatsiri, nevakomana vanobva kuMountain View, vanozvimiririra vanogadzira vanozviita.
Kana Google isina kupa iyi rutsigiro, pamwe zvaive zvakadaro nekuti anga asingafarire, saka zvingangoita kuti kambani iite chero chikonzero chekubvisa ichi chishandiso kubva kuGoogle Play Store, kunyanya izvozvi zvavaburitsa ma-headphones asina waya kuti vakwikwidze nemhando dzakasiyana dzeApple mundima iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Android » Neichi chishandiso unogona kushandisa Google Mubatsiri neako Android smartphone uye AirPods
Iyo yakanaka app, saka avo vane Android vanogona zvakare kunakidzwa neAirpods.
Twitter inogadziridza yeApple TV ichiwedzera syncing neIOS zvishandiso